Gerard Pique ayaa sheegay in garsoorayaasha La Liga ay si miyir la’aan ah u doortaan Real Madrid
Home Horyaalka Spain Gerard Pique ayaa sheegay in garsoorayaasha La Liga ay si miyir la’aan...
Gerard Pique ayaa sheegay in garsoorayaasha La Liga ay si miyir la’aan ah ugu hiilinayaan Real Madrid wuxuuna su’aal ka keenay inay waligood noqon doonaan kuwo aan dhex dhexaad aheyn.
Gerard Pique wuxuu had iyo jeer ahaa ciyaaryahan aan ka cabsaneyn inuu ka hadlo maskaxdiisa wareysiyada. Ciyaaryahanka reer Spain ayaa si aad ah uga hadlay arrimaha ciyaartoyda isagoo xitaa u yeeray guddiga Barcelona hore.
34 jirkaan ayaa haatan sheegay in garsoorayaasha La Liga ay gaaraan go’aano garoonka dhexdiisa ah oo waxtar u leh Real Madrid.
Hadalka Pique ayaa yimid kadib markii garsoore hore uu shaaca ka qaaday in 85% garsoorayaasha reer Spain ay ka yimaadeen Madrid. Wareysi uu siiyay Post United ayuu ku yiri:
“Maalin dhaweyd garsoore hore wuxuu yiri boqolkiiba 85 garsoorayaashu waxay kasoo jeedaan Madrid. Sidee ayan ugu oori doonin oo ay ugu hiilin doonaan Madrid. Xitaa iyadoo miyir la ‘, sidee ayan u siin doonin dhinac ka badan kan kale ?? Waan ixtiraamayaa xirfada garsoorayaasha waana ogahay inay isku dayaan inay qabtaan shaqadooda ugu fiican, laakiin dhinac ayay u xagliyaan.
Previous articleChelsea oo isha ku heysa saxiixa xiddiga Real Madrid
Next articleJohn Terry oo xushay kooxda ugu cadcad hanashada horyaalka Premier League